Cunnooyinka walaaca: ku hagaaji niyaddaada cuntada | Ragga Stylish
Ma kugu adag tahay inaad xusuusato markii ugu dambeysay ee aad gebi ahaanba degganayd? Xaaladdaas, waxaad xiiseyneysaa inaad fiiriso cuntooyinka ugu fiican ee walwalka.
Kuwani waa cuntooyin caafimaad leh oo si dabiici ah kuu dejin kara. Dooro waxoogaa, kuwa aad ugu jeceshahay, iyo u cun si joogto ah ama marka aad si deg-deg ah ugu baahan tahay inaad ka yarayso walaacaaga.
3 Khudaarta caleenta ah
4 Shukulaatada madow
6.1 Sida loo qaato fiitamiin C badan
10 Khamri cas
Thanks to sifooyinka oats, waxaad bilaabi kartaa inaad xakameyso heerarka walaaca wixii ugu horeeya subaxa hore. Maaddaama ay yihiin karbohaydraytyo adag, waxay u taagan yihiin sahay tamar oo deggan, taas oo muhiim u ah si niyadda aysan hoos ugu dhicin. Laakiin faa'iidooyinka niyadda halkaas kuma eka, sida miraha ayaa sidoo kale kicin kara wax soo saarka serotonin.
Dhadhan oo fudud in la cuno, berry waxay la dagaallami kartaa walwalka iyo niyad-jabka iyada oo ay ugu wacan tahay hodantinimadeeda antioxidants. Waxaad haysataa fursado badan: strawberries, raspberries, blueberries, blackberries ...
Ma ogtahay in kooxdan raashinka ahi ay yihiin kuwa ugu waxtarka badan markay timaado inay kuu horseedaan xaalad degenaansho iyo ladnaan? Tani waxay sabab u tahay, iyo waxyaabo kale, kaalinteeda xiisaha leh ee magnesium. Cunnooyinka sida isbinaajka iyo kale ayaan kaliya la dagaallamin welwelka, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyin kale oo badan, sidaa darteed ku darista cuntadaada waa fikrad aad u fiican meelkastoo aad eegtid.
Shukulaatada madow waxaa lagu tiriyaa faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan hoos u dhigista heerarka welwelka. Sida berry oo kale, sirtu waxay ku jirtaa antioxidant-keeda, xaaladdan oo ah nooc loo yaqaan flavonoids. Waa in la ogaadaa, in kasta oo ay ku jiraan sonkor ka yar noocyada kale, waxaa lagama maarmaan ah in lagu cuno si dhexdhexaad ah. Gabal yar maalintii ayaa ku filan inuu helo faa iidooyinkiisa caafimaad isla markaana ka takhaluso cilladahiisa, oo ay ku jiraan baruurta xad-dhaafka ah iyo kafee-ka (taas oo qiyaaso badan ka dhigaysa astaamaha walwalka oo ka sii daraya).
Ukuntu waxay bixisaa folic acid, u fiican niyadda iyo tamarta. Ilaha kale ee xiisaha leh ee fiitamiinnada B waa kalluun iyo digaag.
Ukuntu waxay kaloo siisaa nafaqooyin kale oo xiiso leh jirkaaga, sida zinc. Macdadan ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa maaraynta culeyska fekerka, laakiin ma ahan wax aan caadi ahayn in la helo dad aan cabin wax ku filan. Hilibka lo'da, hilibka cad, iyo lowska sidoo kale waxaa ku jira zinc. Haddii aad tahay khudrad ama khudradeed, waxaad ka heli kartaa macdantaan cuntooyinka asalka u ah xoolaha, sida cashews.
Quraac, qado, cunto fudud ama macmacaan ahaan. Waqti kasta waa wakhti fiican oo la cuno liinta oo lagu raaxeysto faa'iidooyinka fitamiin C. Sida lagu sheegay cilmi baarista, mid ka mid ah faa'iidooyinkaas ayaa noqon doonta xakameynta walaaca. Marka Haddii aad raadineyso cunnooyin walaac, liinta shaki la’aan waa mid kamid ah kuwa ay tahay inaad tixgeliso.
Sida loo qaato fiitamiin C badan
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka leh fitamiin C. Halkaas waxaad ka heli doontaa xulashooyin cunto oo kaa caawin doona inaad kordhiso jiritaanka fiitamiinkan muhiimka ah ee cuntadaada.
Qaxwada waxay faa'iido u yeelan kartaa walaaca maadaama ay xoojiso niyadda iyo heerarka tamarta. Si kastaba ha noqotee, mid waa inuu si taxaddar leh u shaqeeyaa, maadaama ay sidoo kale waxyeello u geysan karto iyadoo ku xiran xaddiga la nuugay iyo u dulqaadashada qof kasta ee kafeyn. Haddii aad rabto inaad ku soo bandhigto cuntadaada si aad ula dagaallanto cilladda na khuseysa munaasabaddan, ku bilow qadar yar si aad u hubiso inaad ka fogaato waxyeelooyinkeeda suurtagalka ah. Haddii aad si fiican ugu dulqaadatid, waad yareyn kartaa qadarka yar yar haddii aad rabto. Khabiiradu badanaa waxay xadka ka dhigaan afar koob maalintii.
Cunnooyinka welwelka leh waxaan ka helnaa xulashooyinka dhammaan dhadhanka, kalluunka sidoo kale. Salmon iyo kalluun kale oo dufan leh (sardines, mackerel, tuna ...) ayaa kaa caawin kara inaad la dagaallanto niyad-jabka iyo walwalka iyada oo ay ugu wacan tahay ficil-celinta anti-bararka ee omega 3 dufanka asiidhka ah.
Shaaha geedaha qaarkood ayaa wax ku ool u leh yareynta walwalka, waana suurta gal inaad hore u haysatay midka aad ugu jeceshahay. Waxay noqon kartaa shaah (cabitaan leh tallaabo muhiim ah oo lagu qaboojiyo), laakiin waxaa jira dhir kale oo badan oo mudan in la ogaado. Midkood waa chamomile, laakiin waxaad sidoo kale tijaabin kartaa valerian ama linden. Wax kasta oo ay tahay, dhis wax yar oo cibaado ah hareeraha si loo kordhiyo saameynta nasashada. Jirkaagu wuxuu laxiriiraa daqiiqado yar oo goynta ah, kana go'antahay walwalka kugu hareeraysan, waxay ka caawineysaa sare u qaadista faa'iidooyinkiisa walaaca.
Khamri cas iyo cabitaanno kale oo khamri ah (haa, sidoo kale kan biir ah) wuxuu ka caawiyaa dad badan inay nastaan ​​ka dib maalin adag oo xafiiska ka mid ah. Dabiici ahaan, looma baahna in si xun loo isticmaalo isticmaalkiisa, iyada oo ay tahay xadka ay xadeen khubarada laba maalin oo cabitaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cunnooyinka walaaca
Astaamaha danjiraha caanka ah ee dharka ragga